XUQUUQDA AADANAHA IYO ILAALINTA | UNSOM
06:39 - 25 Sep
XUQUUQDA AADANAHA IYO ILAALINTA
Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee tirsigiisu yahay 2102 ee soo baxay 2-dii May 2013 ayaa lagu aasaasay Hawlgalka Taakulaynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) wuxuuna siiyay Hawlgalka sharciyad xooggan oo la xiriirta xuquuqda aadanaha. Sharciga ayaa u ogolaanaya UNSOM inay dabagasho, gacan ka geysato baarista iyo inay ku wargeliso Golaha gaboodfal kasta ama xadgudubyo kasta oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ama xadgudubyada ka dhanka ah sharciga caalamiga ah ee bini’aadannimada ee ay geystaan dhammaan dhinacyada kala duwan ee ku sugan Soomaaliya. Sharciga ayaa sidoo kale u ogolaanayaa Hawlgalka inuu gacan ka gaysto ka hor-tagga gaboodfallada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo sharciga bini’aadannimada ee caalamiga ah.
Ujeeddooyinkan dartood, sharciga wuxuu saamaxayaa dejinta iyo diyaarinta u kuurgaleyaal qaabilsan xuquuqda aadanaha.
Qaraarka Golaha Ammaanka ee 2102 iyo qaraarro kale oo xigay waxay xoogga saareen muhiimadda ay leedahay in AMISOM ay addeecdo, dabagal ku samayso sidoo kalena taageero u muujiso hirgelinta Siyaasaddda Xog-haya Guud ee Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Aadanaha iyo Maareynta Halista iyo Siyaasadda Qaramada Midoobay ee Dulqaad-la’aanta Gaboodgallada Galmada.
Qaraarrada Golaha Ammaanka ee tirsigoodu yahay 2036 (2012), 2093(2013), 2124 (2013), 2232 (2015), iyo 2245 (2015) waxay xaqiijiyeen in taageero kasta oo Qaramada Midoobay ay siinayso xoogagga ammaanka ee aan ka mid ahayn Qaramada Midoobay, oo ay ku jiraan Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo Ciidanka Qaranka Soomaaliya, ay si buuxda u waafaqsan tahay Siyaasadda Xuquuqda Aadanaha ee Maareynta Halista. Waxaa intaas dheer, in Hawlgalka awood loo siiyay inuu gacan ka gaysto dhismaha awoodda Dowladda ee dhinacyada xuquuqda aadanaha, awoodsiinta haweenka, ilaalinta carruurta, la dagaallanka rabshadaha galmada ee xiriirka la leh colaadaha, iyo taageerista xoojinta ku dhaqanka sharciga iyo hirgelinta qorshe-hawleedka ku saabsan xuquuqda aadanaha.
Kooxda Ilaalinta iyo Xuquuqda Aadanaha ee UNSOM (HRPG) ayaa u xil-saaran fulinta waajibaadka xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta ee Hawlgalka. Waxaa kooxdan hoggaamiya Madaxa Kooxda Ilaalinta iyo Xuquuqda Aadanaha, waxaana xubno ka ah la taliyeyaasha ilaalinta haweenka iyo kuwa carruurta. Marka ay hirgelineyso waajibaadkan, Kooxda HRPG waxay ka hawlgashaa inta badan gobollada Soomaaliya iyadoo u maraysa xafiisyo ay goobahaasi ku leedahay. Xilliga hadda la joogo, kooxdu waxay xafiisyo ku leedahay magaalooyinka Muqdisho, Garoowe, Hargeysa, Baydhabo, Kismaayo iyo Beledweyne. Saraakiil xuquuqda aadanaha qaabilsan ayaa sidoo kale la geeyay dhammaan xafiisyada si ay ugu kuurgalaan xuquuqda aadanaha u lana shaqeeyaan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada si ay u hirgeliyaan waajibaadkooda.
Shaqada UNSOM waxay dabooshaa waaxyo ballaaran oo xuquuqda aadanaha ah. Sanadka 2016, Waxyaabaha mudnaanta u leh Kooxda Xuquuqda Aadanaha ee UNSOM (HRPG) waxaa ka mid ah:
Weerarrada ka dhanka ah rayidka iyo danaha rayidka
Dilalka ka baxsan sharciga
Xirista iyo xabsiyaynta aan xaqa ahayn
Rabshada Galmada ee la xiriira Colaadaha iyo kuwa la xiriira jinsiga
Xuquuqda Aadanaha ee Dabagalka Doorashooyinka
Takooridda ka qeybgalka siyaasadda
Xoojinta xuquuqda aadanaha ee Horumarinta iyo Ajandeyaasha Bini’aadannimada.
Taageerada loogu talagalay Dowladda
Soomaaliya waxay wajahaysaa caqabado dhab ah oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah kaddib in ka badan 20 sano oo dalku ay colaado ragaadiyeen. Mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan waa jiritaan la’aanta hab qaran oo qaabilsan xuquuqda aadanaha kaas oo awood u leh inuu jawaab ka bixiyo caqabadaha kala duwan ee xuquuqda aadanaha ee dalka ka jira. Si arrintan wax looga qabto, Kooxda Qaramada Midoobay u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha (HRPG) waxay taageero isugu jirta mid la-talin ah iyo farsamaba siisaa Dowladda Federaalka Soomaaliya si ay ula kulanto waajibaadyadeeda xushmaynta, ilaalinta iyo fulinta xuquuqda iyo xorriyadda dadka Soomaaliyeed sida ku xusan Dastuurka Ku-meel-gaarka ah ee 2012 iyo sharciyada kala ee caalamiga ah ee Soomaaliya ay qeybta ka tahay.
Wada-shaqeynta ugu weyn ee u dhaxeysa UNSOM iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ee waaxda xuquuqda aadanaha ayaa ahayd horumarinta Qorshaha Xuquuqda Aadanaha ee Marxaladda Kalaguurka Kaddib kaas oo Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ansixisay Agoosto 2013. Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha ayaa hoggaamineysay hannaanka lagu horumarinayo Qorshaha waxayna soo gabagabaysay qorshe hawleed kaddib wada-tashi qaran oo ay taageertay Kooxda UNSOM ee Xuquuqda Aadanaha rubucii labaad ee 2015.
Qorshe Hawleedka ayaa isku dayaya inuu hirgeliyo talooyin ka soo baxay Hannaaanka Caalamiga ah ee Muddaysan ee Dib u Eegista ee hoos yimaada Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay. Iyadoo la kaashanaysa bahwadaag kale, Kooxda Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Aadanaha waxay ka caawisay Soomaaliya gudbinta warbixin qarameedkeedii labaad ee ay u gudbisay Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay bishii Oktoobar 2015, waxaana dib u eegis lagu sameeyay xaaladda xuquuqda aadanaha Soomaaliya bishii Jannaayo 2016.
UNSOM oo la kaashanaysa bahwadaagta kale waxay ka caawisay Dowladda Federaalka Soomaaliya inay sameyso xeer sharciyeed qabyo-qoraal ah oo ku aaddan dhismaha Guddiga Qaran ee Madaxabannaan ee Xuquuqda Aadanaha, kaas oo waafaqsan heerarka caalamiga ah, oo ay ka mid yihiin Mabaadi’da Paris ee ku aaddan hay’adaha qaran ee xuquuqda aadanaha.
Xeerka ayaa loo soo bandhigay dib u eegis kala barkii koowaad ee 2016 intii uu socday kalfadhigii ugu dambeeyay Baarlamaanka Federaalka ee haatan jira. Intii lagu jiray 2015, Soomaaliya waxay ansixisay Heshiiska Xuquuqda Carruurta, waana in mudnaan la siiyaa hirgelinta heshiiskan.
Ka heer gobol ahaan, UNSOM waxay taageertay dhismaha Xafiiska Difaaca Xuquuqda Aadanaha (OHRD) oo laga furay Puntland horraantii 2015. Iyadoo qeyb ka ah dadaalladeeda ay ugu ololaynaysa furitaanka Xafiiska Difaaca Xuquuqda Aadanaha, UNSOM waxay dood furan la yeelatay saaxiibbada caalamiga ah ee ka shaqeeya waaxda xuquuqda aadanaha waxayna isku afgarteen inay kala shaqeeyaan dowladda sidii ay u samayn lahayd xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha, kaas oo hadda shaqeynaya. Xafiiska ayaa durba billaabay inuu dabagal ku sameeyo xuquuqda aadanaha iyo inuu fuliyo dadaal uu adeegyada ku gaarsiinayo dadweynaha.
Bishii Abriil 2016, Xafiiska OHRD wuxuu billaabay warbixin sanadeedkiisii ugu horreeyay oo ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee Puntland. UNSOM waxay kaloo taageertaa Guddiga Qaran ee Somaliland ee Xuquuqda Aadanaha iyadoo ka taageerta dhinaca awoodda iyo dabagalka.
Xoojinta u hoggaansamidda Ciidamada Ammaanka ee heerarka xuquuqda aadanaha
Xadgudubyo badan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo la galay muddadii ka badnayd labaatanka sano ee uu socday dagaalka ayaa loo tiiriyay ciidamada ammaanka, oo ay ku jiraan maleeshiyooyin galay xadgudubyadan iyagoo aanan ka cabsanayn in sharciga la soo taago. Si loo jabiyo taxanahan ciqaab la’aanta dadka dambiyada gala, UNSOM waxay la shaqeyneysaa Ciidanka Qaranka Soomaaliya, Hawlgalka Tababarka ee Midowga Yurub iyo AMISOM si ay ciidamada ammaanka Soomaaliya u siiyaan tababar la xiriira fahanka iyo u hoggaansamidda heerarka xuquuqda aadanaha inta ay ku jiraan hawlahooda maalinlaha ah. Tababarka xuquuqda aadanaha ee la siinayo Ciidanka Qaranka Soomaaliya ayaa ah mid shardi ah si loo helo taageerada Qaramada Midoobay ee la siiyo ciidanka qaranka. Intii lagu jiray 2016, in ka badan 10,000 oo ka tirsan Ciidanka Qaranka Soomaaliya ayaa la siiyay tababar la xiriira xuquuqda aadanaha iyo arrimaha sharciga caalamiga ah ee bini’aadannimada.
Si kor loogu qaado u hoggaansamidda ciidanka AMISOM ee xeerka caalamiga ah ee xuquuqda aadnaha iyo xeerka caalamiga ah ee bini’aadannimada marka ay gudanayaan waajibaadyadooda shaqo ee ay ka hayaan Soomaaliya, UNSOM iyadoo la kaashanaysa Waaxda Tababarka ee Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOS) iyo AMISOM, waxay ciidamada AMISOM siinaysay tababar ka hor inta aan la gayn waddanka.
Kooxda Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay (HRPG) waxay kala shaqeyneysay Hay’adda Caalamiga ah ee Bancroft hirgelinta Xeerka Dhaqan-gelinta iyo barnaamijka Xuquuqda Aadanaha ee loogu talagalay Ciidanka Booliska Soomaaliya. Intii lagu jiray 2015 iyo 2016, 120 sarkaal oo ka socday Waaxda Dambi-baarista iyo Waaxda Miinooyinka iyo Walxaha aan Qarxin ayaa ka faa’iidaystay ilaa lix tababar oo lagu qabtay Muqdisho. Ujeeddada ugu wayn ee tababarkan laga lahaa ayaa ahayd in la xoojiyo aqoonta iyo fahanka saraakiisha ay u leeyihiin heerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo xeerarka qaran ee la dabakhi karo ee khuseeya shaqada booliska iyo in laga caawiyo saraakiisha booliska inay mabaadi’da xuquuqda aadanaha ku dabakhaan adeegga booliska.
Siyaasaddda Xuquuqda Aadanaha iyo Maareynta Halista (HRDDP)
13-kii July 2011, Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa meelmariyay siyaasadda Xuquuqda Aadanaha iyo Maareynta Halista - HRDDP ee ku aaddan taageerada Qaramada Midooaby ee la siiyo ciidamada amni ee aan ahayn kuwa ay Qaramada Midoobay leedahay. Siyaasaddan waxay xaqiijinaysaa in Qaramada Midoobay ay ku taagan tahay mabaadi’deeda iyadoo dammaanad qaadaysa in taageerada ay siinayso Ciidamo amni oo aan ahayn kuwa Qaramada Midoobay meel kasta adduunka ha ka joogaan e, ay tahay mid waafaqsan Cahdiga ururka iyo waajibaadkiisa ee waafaqsan xeerka caalamiga ah ee ah in la ixtiraamo, la horumariyo lana dhiirrigeliyo xushmadda loo hayo sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo sharciga qaxootiga. Intii lagu jiray Abriil 2014, waxaa la ansixiyay Heerka Nidaamka Shaqo (SOP) ee hirgelinta siyaasadda HRDDP ee Soomaaliya.
Heerka Nidaamka Shaqo wuxuu bixinayaa hagitaan, wuxuuna abuurayaa nidaamyo lagu hirgelinayo siyaasadda Soomaaliya, sida Kooxda Wadashaqeynta ee UN-AMISOM ee ku aaddan hirgelinta HRDDP iyo Xoogga Shaqada ee UN-HRDDP. Hababkani waxay door wayn ku lahaayeen hirgelinta HRDDP. Kaddib in ka badan labo sano oo la hirgelinayay siyaasadda, waxaa la gaaray guulo, sidoo kale waxaa jiray caqabado iyo casharro muhiim ah oo la bartay. Heerka Nidaamka Shaqo ee SOP waxaa lagu samayn doonaa dib u eegis, taas oo la hirgelin doono dhowaan si loola tacaalo arrimaha soo ifbaxay intii lagu guda jiray hirgelinta.
Dabagalka iyo ka soo warbixinta xaaladda xuquuqda aadanaha
UNSOM waxay sii waddaa kormeeristeeda joogtada ah iyo waajibaadyadeeda ka soo warbixinta xaaladda xuquuqda aadanaha ee ka jirta gudaha dalka, iyadoo si gaar ah diiradda u saaraysa xadgudubyada iyo gaboodfallada ka dhasha ficillada iyo reebitaannada ay sameeyaan awoodaha qaran iyo kuwa goboleedyadaba. Kooxda HRPG waxay sidoo kale dabagashaa kana soo warbixisaa eedaha la xiriira xadgudubyada ay galaan dhinacyada ku lugta leh colaadda ka socota dalka taas oo ciidamada ammaanka Soomaaliya, AMISOM iyo Al-Shabaab ay door wayn ku leeyihiin. Dhinacyada sida wayn diiradda loo saarayo waxaa ka mid ah xaaladda Carruurta ku lugta leh Colaadda Hubaysan iyo Rabshada Galmada ee xiriirka la leh Colaadda. Kooxda HRPG waxay sidoo kale la shaqeysaa hay’adaha Qaramada Midooaby, deeq bixiyeyaasha iyo barnaamijyada iyadoo xubin ka ah Kooxda Qaramada Midoobay ee Dalka.
Macaamil la yeelashada bulshada rayidka iyo hay’adaha kale
Ururrada bulshada rayidka Soomaaliya (CSOs) waxay sii wadaan inay door muhiim ah ka ciyaaraan kala guurka dimuqraadiyadeed ee dalka. In kasta oo ay jiraan caqabado badan iyo halis ay wajahayaan, ururrada bulshada rayidka waxay safka hore kaga jireen la dagaallanka isla xisaabtan la’aanta iyo xoojinta mas’uuliyadda iyo ku dhaqanka sharciga ee Soomaaliya. HRPG waxay si joogta ah macaamil ula leedahay kooxaha bulshada rayidka ah si loo sii wado wada-xaajoodka, gacanna looga gaysto dadaallada dib u heshiisiinta iyo dhisidda qaranka. UNSOM waxay taageertaa macaamilka ay ururrada bulshada rayidka ah la leeyihiin Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamullada kale si ay u muujiyaan walaaca ku aaddan isla xisaabtan la’aanta dambiyada, mas’uuliyadda iyo ku dhaqanka qaanuunka.
Kooxda HRPG ee UNSOM waxay aasaaseen Madasha Bulshada Rayidka ah, kaas oo si bille ah u kulma si uu uga doodo arrimaha xuquuqda aadaha iyo awood kobcinta. Isagoo u maraya madasha, Hawlgalka wuxuu isku dayaa inuu wax ku biiriyo kobcinta awoodda ururrada bulshada rayidka ah ee ka shaqeynaya arrimaha xuquuqda aadanaha, isku xirka iyo kor u qaadista shaqadooda.
UNSOM waxay fududaysaa doodaha iyo wadatashiyada ururrada bulshada rayidka ah si ay uga caawiso inay si wanaagsan ula shaqeeyaan hay’adaha dowladda Soomaaliya iyo bulshada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha si kor loogu qaado xuquuqda aadanaha. 2015-kii, UNSOM waxay fududaysay ka qeybgalka 100 ka tirsan hay’adaha bulshada rayidka ah ee ka hawlgala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, Puntland iyo Somaliland wadaxaajoodyo ku saabsan horumarinta warbixinta ururrada bulshada rayidka ah ee loogu talagalay habka dib u eegista mudaysan ee caalamiga ah, kaas oo markii dambe loo gudbiyay Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay.
UNSOM waxay kaloo la shaqeyneysay ururrada bulshada rayidka ah waxayna tababartay qaar ayaga ka mid ah si loo xoojiyo awooddooda ay ku kormeerayaan kagana warbixinyaan xuquuqda aadanaha ee dalka. Maadaama uu xaddidan yahay gaaritaanka sababo la xiriira xaaladda amni, shaqada ururrada bulshada rayidka ah waxay muhiim u tahay dabagalka iyo ka warbixinta xadgudubyada iyo gaboodfallada ka dhanka ah xuquuqda aadanah, gaar ahaan meelaha fog fog.
La shaqeynta ururrada bulshada waxay u ogolaanaysaa UNSOM inay gaarto qeybo muhiim ah oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ah oo ay ku jiraan dhallinyarada, ardayda, iyo dadka ku barakacay dalka gudihiisa. 2015-kii iyo 2016-kii, UNSOM iyo saddex hay’adaha bulshada rayidka ah ka tirsan ayaa si wadajir ah waxay saddex siminaar oo xuquuqda aadanaha ku sabaassan u qabteen dhallinyaro iyo qaar ka tirsan dadka ku barakacay Muqdisho.
Macaamilka lala leeyahay Dowladaha kale iyo Hawlgallada Diboomaasiyadeed
Kooxda HRPG waxay sii wadday inay ka qeybgasho hawlaha Kooxda Xuquuqda Aadanaha Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Nairobi, taas oo ka kooban Midowga Yurub iyo Dowladaha Xubnaha ka ah, Norway, Switzerland iyo Mareykanka.
HRPG waxay u isticmaashaa meel ay ugu ololeyso kuna taageerto Dowladda Federaalka Soomaaliya Horumarinta xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta.
UNSOM waxay sii waddaa inay si dhow ula shaqeyso Khabiirka Madaxabannaan ee ku hawlan xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya, Xafiiska Guddoomiyaha Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Aadanaha iyo Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay si ay u sii wadaan dadaalkooda ku aaddan horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya.
Heshiiska QM ee Xuquuqda Dadka Naafada ah.pdf
Barakacayaasha iyo kaqeybgalka Siyaasadda Soomaaliya.pdf
Ilaalinta Dadka Rayidka.pdf
Xuquuqda Aadanaha ee Hanaanka Doorashooyinka Soomaaliya.pdf